30kii maalmood ee aan xaaskayga xambaaray – Qaybta 4 | Somaliska
Maanta waxaan qaadaneynaa qeybtii 3-aad ee sheekadii xiisaha badneyn “30kiimaalmood ee aan xaaskayga xambaaray” Qeybtii hore waxaad ka akhrisan kartaa halkaan. Osman ayaa sheekadii meeshii aan ku dhaafay nooga sii wadaya.
Maalintii sadexaad waxay ugu dhaaftay degdeg maadaama aan ka daahay shaqada. Maalintii afaraad markii aan xambaaray xaaskeyga waxaan dareemay in uu isbedel ku yimid aragtidii aan ka qabay xaaskeyga isbuuc ka hor. Waxaan kale oo dareemay in uu soo noqday dareenkii rabitaan ee xaaskeyga, mudo badan waxaa guurkeena ka maqnaa xiisaha iyo israbitaanka. Xitaa iskuma aanan tagin dhowr bilood balse maanta waxaan dareemay rabitaan.
Bishii waxay ku socotay degdeg, maalintii shanaad, lixaad iyo todobaad waxaa sii kordhay rabitaankeyga, waxaan dareeemay jaceyl cusub. Waxaan yaqiinsaday tani in ay tahay xaaskeyga oo 10 sano oo nolosheeda qaaliga ah ka mid ah ku bixisay guurkeena iyo dhisada reerkeena. Deeqo iyada uma aanan muujin wax isbedel ah inkastoo ay dareentay in uu yaraaday hadal hayntii aan ka sheekeysan jirnay furiinka xaaskeyga iyo sida aan iyada ula noolaan doono.
Waxaan xasuustaa subax subaxyada ka mid ah xaaskeyga oo doonaysa in ay labisato balse ay ku adkaatay in ay doorato maro ku haboon, waxaann isdhahay maxay tahay dhibaatada jirta balse markii aan u soo dhawaaday waxaan dareemay in ay ka yaraadeen dhamaan dharkeedii, waxay ku caatowday walwalka furiinka iyo in ay qarisay xanuun badan oo aan u geystay. Waxaan ku dhawaaday in aan ilmeeyo, markaas ayaan u soo dhawaaday oo madaxa ka taabtay. Si naxariis ku jirto ayay ii eegtay iyada oo aan hadlin.
Inaga oo is fiirinayna ayaa waxaa qolka soo galay wiilkeena oo isaga ay xiiso ku hayso in uu daawato aabihiis oo hooyadiis xambaaraya markaas ayuu yiri “Aabe, waxaa la gaaray xiligii aad hooyo xambaari lahayd” hooyadiis ayuu ku soo orday oo hab siisay. Anigu markaas waxaan go’aansaday in aan ka jeesto waayo waxaan ku dhawaaday in aan madaxayga badalo oo aan ka laabto furiinka, taasna hada diyaar uma ihi. Waxaan bilaabay xambaarkii, waxay si dareen leh u qabsatay garbahayga aniguna waxaan ka qabtay dhexda, waxaa igu soo laabtay dareenkii maalintii arooskeena.
Maalintii ugu dambesay ayaa la gaaray ee xambaarka. Wiilkeena subaxaas iskuulka ayuu aaday oo guriga waxaa ku soo haray labadeena oo keliya. Markii la gaaray xiligii xambaarka ayaan si xoogan dhexda uga qabtay waxaana ku iri “Ma dareemin in nolosheeda uu ka maqnaa isku soo dhawaashaha iyo jaceylka” markaas ayay iigu jawaabtay, “Haa, balse adiga ayaa iga dheeraaday”. Markaas ayaan furaha baabuurka intaan degdeg ku raadsaday waxaan si aan leexleexasho lahayn u abaaray xafiiska.
La soco qeybta ugu dambeysa.
macan badana shekadan
Ar macaan badanaah kk wan kahelay for me thanks
sas aya laraba mansha allaaah xaqa xaaskisa aya allaha tusay sheekda caadi ma ahan
shekadaan caadi ma,ahan
woooow inaba cadi mahan shekadaan waan ka helaay cml
shakaas daabay u fican ta hay waana wax waanag san